Kenya oo lugaheeda ku weyn doonta dhibaateynta Somalida |
Kenya oo lugaheeda ku weyn doonta dhibaateynta Somalida
Ku xigeenka Agaasimaha Amnesty international ee bariga qaarada Africa Michelle Kagari,ayaa warbixin uu soosaaray oo lagu daabacay bogga Amnesty waxa uu kusheegay in qaxootiga somalida ee dalka Kenya wali ay kujiraan caburinta ay kuheeso dowlada dalka Kenya .
Michelle kagari ayaa sidoo kalle sheegay in howlgalka dowlada Kenya ay bilowday uu yahay mid ciqaabaya somalida reer Kenya ,wallow ay jirto sida uusheegay in Kenya ay xaq uleedahay sugida amaanka dalkeeda .
Kenya ayaa gudaha dalkeeda kabilowday howlgalada somalida bishii april horaanteedii sanadkan kadib markii qaraxyo dalkeeda ay kadhaceen ,Joseph Olelunku Wasiirka arimaha Gudaha Kenya ayaa laga soo xigtay in 4,000 oo Somali ah lagu xiray dalkaasi isbuucii ugu horeeyay howlgalada dalkaasi.
Amnesty international ayaa sheegtay in iyaga aysan udoodi doonin Ruuxii Argagixiso ah balse ay diirada saarayaan Qaxootiga dalkaasi kudhaqan ee tacadiga lagu hayo. Hay’adu waxay sheegtay iney diiwaan galisay Kiisas dhowr ah oo kabaxsan xuquuqda aadanaha oo kadhasahay xiligii howlgalku uu kasocday dalkaasi Kenya.
Kenya waxa kusugan in kabadan nus malyuun qaxooti Somali ah kuwaa oo qaar kamid ah dalka dib loogu sooceliyay kadib markii Kenya ay soo tarxiishay.